Dal Doonayay In Uu Dhisto Caasimad Cusub Oo Qorshahaasi Hakiyay | Kaafi News
Dal Doonayay In Uu Dhisto Caasimad Cusub Oo Qorshahaasi Hakiyay
Dowladda Indonesia ayaa hakisay qorsha ay ku doonaysay inay ku dhisto caasimad cusub oo badasha magalada madaxda Jakarta.
Xukuumadda ayaa go’aankan sabab uga dhigtay feyriska Corona oo saamayn ku yeeshay dhaqaalaha dalkaasi.
Saraakiisha dalkaasi ayaa waxay sheegeen in mashruucani balaayiinka doolar ah oo la doonayay in caasimad looga dhiso jasiiradda Borneo imika la joojiyay.
Madaxwayne Joko Widodo ayaa sanadkii aanu soo dhaafnay shaaciyay in mashruucani uu bilaaban doono sanadda 2021.
Madaxwyene Joko Widodo ayaa go’aankaasi waxa uu ku sababeeyay inuu ku yimid saxmadda faraha badan ee magaaladaasi ka jirta iyo in magaaladu ay ka mid tahay magaalooyinka sii dagaya ee caalamka.
Magaalada madaxda Indonesia ee Jakarta – oo hoy u ah in ka badan 10 milyan oo qof .
Magaalada Jakarta ayaa ku taalla jasiiradda saxmadda badan ee Java.
Ma jiraan dalal horey u badalay caasimadahooda?
Waxaa jira dalal badan oo iyagu badalay caasimadahooda iyaga oo u cuskaday sababo kala duwan., waxaana ka mid ah dalalkaasi.
Caasimadda cusub ee Myanmar Naypyidaw iyo dhismooyinkeeda waa weyn ayaanay ilaa iyo haatan dad joogin
Sharaxaadda rasmiga ah ee ah in caasimadda laga raro magaalada Yangon ayaa ah in magaalada qadiimiga ah ay noqotay ciriiri dadku ay ku badan yihiin, hasayeeshee sababo kale ayaa arrintaasi qeyb ka noqon kara.
Magaalada Naypyidaw ayaa waxa ay ku taal bartamaha dalkaas waxa ayna taas u sahlaysaa dowladda inay si wanaagsan u maamusho gobollada fogfog ee ay fallaagooyinka ka jiraan.
Balse dad badan oo ku nool Myanmar ayaa waxa ay rumaysan yihiin in arrinta dhabta ah ee go’aankaasi dhalisay inay tahay in milateriga dalkaasi xukumayay tan iyo 1962 uu dareemay in caasimadda cusub ay u fududaynayso in aanay soo gaarin kacdoonnada iyo faragelinta shisheeye.
Qoraalka sawirka,Putrajaya ayaa qeyb ahaan noqotay caasimadda cusub ee Malaysia
Putrajaya, Malaysia (2002)
Putrajaya ayaa qeyb ahaan noqotay caasimadda cusub ee Malaysia
Magaalada la qorsheeyay ayaa waxa ay noqotay xarunta dhexe ee federaalka ee Malaysia hasayeeshee Kuala Lumpur ayaa waxa ay weli tahay caasimadda rasmiga ah.
Taasi kama aanay hor istaagin mas’uuliyiinta Malaysia inay u badalaan magaalada waxa badanaa lagu tilmaamo ee ah inay tahay farsamada casriga ah ee layaabka leh ee dhismaha.
Astana caasimadda Kazakh, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu casriyaysan Bartamaha Aasiya
Qoraalka sawirka,Astana caasimadda Kazakh, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu casriyaysan Bartamaha Aasiya
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan (1997)
Waxaa si ku haboon loogu magac daray kalmad luuqadda Kazakhan ku ah “caasimad”, Astana waxaa 1997 lagu dhisay amar uu soo saaray madaxweynihii xilligaas Nursultan Nazarbayev.
Durbadiiba waxa ay ka mid noqotay magaalooyinka casriga ah ee Bartamaha Aasiya – oo ay astaan u tahay dhismooyin cusub oo soo jiidasho leh.
Markii uu bilowgii sanadkan iscasilay Madaxweyne Nazarbayev ayey mas’uuliyiinta Kazakh waxa ay ugu magac dareen Nur-Sultan.
Qoraalka sawirka,Dhibaatooyinka dadka faraha badan ee Lagos ayaa mas’uuliyiinta Nigeria waxay ku qasabtay inay caasimadda u wareejiyaan magaalada Abuja
Dhibaatooyinka dadka faraha badan ee Lagos ayaa mas’uuliyiinta Nigeria waxay ku qasabtay inay caasimadda u wareejiyaan magaalada Abuja
Caasimadda Nigeria ayaa waxaa laga raray Lagos oo waxaa la geeyay Abuja sanadkii 1991, arrintan ayaa waxa ay qeyb ka aheyd dedaallo la doonayay in lagu sameeyo magaalo ka madax bannaan saddexda qowmiyadood ee waa weyn ee dalkaasi ee Yoruba, Igbo iyo Hausa-Fulani.
Hasayeeshee isbadelkaasi ayaa waxaa sidoo kale sii dhiirigaliyay dhibaatooyinka dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee Lagos, taas oo dadka ku nool ay aad u kordheen iyadoo 1970 aheyd 1.4 milyan oo qof sanadkii la soo dhaafayna lagu qiyaasay 21 milyan oo doolar.
Qoraalka sawirka,Islamabad ayaa 1967 waxa ay si rasmi ah u noqotay caasimadda Pakistan
Islamabad ayaa 1967 waxa ay si rasmi ah u noqotay caasimadda Pakistan
Caasimadda Pakistan ayaa sidoo kale waxaa lagu dhisay dedaallo la doonayo in ay isku dhexgalaan dadka dalkaasi.
Karachi ayaa aheyd xarunta maamulka tan iyo markii Pakistan la sameeyay bishii Agoosto 1947 markaas oo ay kala go’een Hindiya, balse waxaa qeyb ahaan hoos loo dhigay maqaamkeedii caasimadda sababtoo ah biyo yari soo wajahday iyo deegaannada qalalan ee ku xeeran.
Qoraalka sawirka,Brasilia ayaa dhismaheeda waxaa laga bilaabay meel ebar ah iyadoo lagu dhisay dhulka sare ee Brazil
Brasilia, Brazil (1960)
Brasilia ayaa dhismaheeda waxaa laga bilaabay meel ebar ah iyadoo lagu dhisay dhulka sare ee Brazil
Rio de Janeiro, oo ah magaalada ugu caansan waddanka Brazil, ayaa waxa ay caasimadda dalkaasi aheyd tan iyo bilowgii qarnigii 17-aad.
Hasayeeshee 1960-yadii ayaa waxaa maqaamkii kala wareegay magaalada Brasilia taas oo laga dhisay dhulka sare ee Brazil ee bartamaha gobolka galbeedka.
Tallaabada lagu raraayo magaalada ayaa waxaa la go’aamiyay 1891 markaas oo mas’uuliyiinta Brazil ay doonayeen inay si wanaagsan dadka isku dhexgaliyaan sidoo kalana ay kor kala socdaan maadaama Rio lagu yaqaan inay u jilicsan tahay weerrarada badda laga soo qaado.
Qoraalka sawirka,Magaalada Quezon ayaa laga qaaday maqaamkii caasimadda oo waxaa 1976 lagu celiyay magaalada Manila
Quezon City, Philippines (1948)
Magaalada Quezon ayaa laga qaaday maqaamkii caasimadda oo waxaa 1976 lagu celiyay magaalada Manila
Magaalada Quezon ayaa ku guulaysatay misana markiiba ku guuldarraysatay maqaamka caasimadda Philippines: waxaa bilaabay oo loogu magac daray madaxweynihii dalkaasi maamuli jiray 1940-yadii Manuel Quezon.
Balse waaxyo badan oo dowladda qaran ayaa waxa ay weli ku shaqeeyaan magaalada Manila, taas oo maqaamkii caasimadda dib u heshay 1976 sababo dhab ah oo jiray awadeed.
Caasimadda Australia ayaa waxaa lagu dhisay qaab tanaasul ah oo u dhaxeeya labada magaalo ee waa weyn ee Sydney iyo Melbourne labadaas oo magaalo oo mid walba ay maqaamkaasi doonaysay.
Walow go’aankaasi la gaaray 1908 ayaa baarlamaanka waxaa Canberra loo raray 1927.
Qoraalka sawirka,New Delhi waxaa caasimadda loo soo raray 1931
New Delhi waxaa caasimadda loo soo raray 1931
Kolkata ayaa waxa ay qarniyo aheyd caasimadda dhulka ay Britain haysatay ee Hindiya. Hasayeeshee 1911 caasimadda ayaa la wareejiyay markaas oo ay aagga magaaladaasi ka ag dhawaayeen kooxaha mucaaradka ku ahaa maamulka Britain.
Caasimadda cusub ayaa waxaa lagu dhisay magaalada qadiimiga ah ee Delhi, taas oo caasimad u aheyd Boqortooyadii Mughal laga soo bilaabo 1648 ilaa 1857.